Micrometer: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba an'ity fitaovana ity | Fitaovana maimaim-poana
Micrometer: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ity fitaovana ity
Na dia mety ho toy ny singa iray amin'ny halavany aza izy io, amin'ny micrometer tiantsika horesahina eto ny fitaovana ampiasaina amin'io anarana io. Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe refy palmer, ary mety ho fitaovana ilaina amin'ny rehetra atrikasa ataon'ny mpanamboatra na ho an'ireo izay liana amin'ny DIY, satria mamela handrefesana amin'ny fomba voafaritra tsara izay tsy hain'ny fitaovana hafa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao bebe kokoa momba izany inona izany, inona no antony anaovany azy, ary koa ny lakilen'ny fisafidianana ny tsara ho an'ny tetik'asa ho avy ...
1 Inona no atao hoe micrometer?
1.2 Ampahany amin'ny mikrometro
1.3 Ahoana ny fiasan'ny micrometera na caliper palmer
2 Aiza no hividianana micrometer
Inona no atao hoe micrometer?
El micrometer, na Palmer caliper, fitaovana fandrefesana tena marina izy io. Araka ny tondroin'ny anarany, dia ampiasaina handrefesana zavatra manana habe kely dia kely miaraka amina fiovana tanteraka. Amin'ny ankapobeny dia mazàna manana lesoka farafahakeliny izy ireo, ka mahavita mandrefy hatramin'ny zato (0,01mm) na ny iray alina (0,001mm) milimetatra.
Ny fisehoany dia hampahatsiahy anao betsaka a caliber vernier na refy mahazatra. Raha ny marina, ny fomba fiasany dia mitovy. Mampiasà visy miaraka amina ambaratonga nahazo diplaoma izay hamaritana ny refy. Ireo fitaovana ireo dia mikasika ny faran'ny zavatra ho refesina, ary mijery ny refiny dia hahazo ny valin'ny fandrefesana ianao. Mazava ho azy, manana farafahakeliny sy ambony indrindra izy, amin'ny ankapobeny dia 0-25 mm, na dia misy lehibe kokoa aza.
Con indostriaIndrindra mandritra ny Revolisiona Indostrialy dia nanomboka niroborobo ny fahalianana lehibe tamin'ny fandrefesana ny zavatra. Ireo fitaovana nampiasaina tamin'izany fotoana izany, toy ny refy mahazatra, na metatra dia tsy ampy.
Andiana famoronana taloha, toy ny mikrometra visy William Gascoigne tamin'ny 1640, izy ireo dia nitondra fanatsarana ho an'ny vernier na vernier izay nampiasaina tamin'ny kalon'ny fahiny. Ny astronomia dia iray amin'ireo sehatrasa voalohany hampiharana azy, handrefesana ny elanelan-tany amin'ny teleskaopy.
Taty aoriana dia hisy fanovana hafa sy fanatsarana an'ity karazana fitaovana ity. Toy ny frantsay Jean laurent palmer, izay tamin'ny 1848, dia nanangana ny fivoaran'ny voalohany ny micrometre tanana. Ny famoronana dia naseho tany Paris tamin'ny 1867, izay hahasarika ny sain'i Joseph Brown sy Lucius Sharpe (an'ny BRown & Sharpe), izay nanomboka nanamboatra azy io ho fitaovana amin'ny ankapobeny tamin'ny 1868.
Ity hetsika ity dia nanamora ny fiasan'ireo mpiasan'ny atrikasa fitaovana tsara kokoa noho ireo izay nananany teo aloha. Fa tsy tamin'ny 1890, raha ilay mpandraharaha amerikana sy mpamorona Laroy Sunderland Starrett nohavaozina ny micromètre ary nasiany patanty endriny hafa ankehitriny. Ankoatr'izay dia nanangana ny orinasa Starrett izy, iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana fandrefesana lehibe indrindra ankehitriny.
Ampahany amin'ny mikrometro
Amin'ny sary etsy ambony dia azonao atao ny mahita ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny kaliperin'ny Palmer na mikrometra. Moa partes Izy ireo dia:
1. vatana: io ilay metaly metika izay mandrafitra ny endriny. Izy io dia noforonina avy amin'ny fitaovana iray izay tsy dia miova firy amin'ny fanovana hafanana, izany hoe, misy ny fanitarana sy ny fihenan-jaza, satria mety hiteraka fandrefesana diso izany.
2. Tope: no mamaritra ny 0 amin'ny fandrefesana. Zava-dehibe ny fanaovana azy amin'ny fitaovana mafy, toy ny vy, hisorohana ny akanjo sy ny triatra ary mety hanova ny refy.
3. Spike: singa finday izy io izay hamaritra ny fandrefesana ny micrometer. Ity no iray mihetsika rehefa manodina ny visy ianao mandra-pifandraisany amin'ilay ampahany. Izany hoe, ny elanelana misy eo an-tampon'ny sy ny spike no refy. Toy izany koa, matetika izy io dia vita amin'ny fitaovana mitovy amin'ilay ambony.
4. Manamboatra levera: mamela anao hanakana ny fivezivezan'ny spike hanamboatra refy mba tsy hihetsika, na dia nesorinao aza ilay sombin-javatra handrefesana.
5. Ratchet: Izy io dia ampahany iray hametra ny hery ampiharina rehefa manao ny refin'ny fifandraisana. Azo ahitsy mora.
6. Amponga finday: Eto no soratana ny refy fandrefesana marina indrindra, amina folo mm. Ireo izay manana vernier koa dia hanana ambaratonga faharoa hafa ho an'ny marimarina kokoa, na dia iray alina amin'ny iray millimetatra.
7. Amponga voafetaka: no amaritana ny refy voafetra. Ny tsipika tsirairay dia milimetatra iray, ary miankina amin'ny toerana misy ny marika amboara amponga, dia io no refy.
Ahoana ny fiasan'ny micrometera na caliper palmer
Ny micrometer dia manana fitsipika tsotra. Miorina amin'ny a visy hanovana fanovana kely amin'ny refy marina noho ny refy. Ny mpampiasa an'ity karazana fitaovana ity dia afaka manamboatra ny visy mandra-pahatongan'ny toro-marika fandrefesana dia mifampikasoka amin'ny velaran'ny zavatra haleha.
Amin'ny fijerena ireo marika eo amin'ny amponga nahazo diplaoma, dia azo faritana ny fandrefesana. Ankoatr'izay, maro amin'ireo micrometre ireo no misy a vernier, izay mamela ny famakiana fandrefesana miaraka amin'ny sombin-javatra noho ny fampidirana ambaratonga kely kokoa.
Mazava ho azy, tsy toy ny caliper mahazatra na caliper, ny fepetra tokana an'i Palmer ivelany savaivony na ny halavany. Efa fantatrao fa ny refy mahazatra dia manana fahaizana mandrefy ao anaty savaivony, ary na ny halaliny aza ... Na izany aza, araka ny ho hitanao amin'ny fizarana manaraka dia misy karazana afaka mamaha an'io.
Misy maro karazana micrometer. Miankina amin'ny fomba famakiana izy ireo dia mety:
Mechanics: manual tanteraka izy ireo, ary ny famakiana dia atao amin'ny fandikana ny ambaratonga voarakitra.
Hafanàm-po an: elektronika izy ireo, miaraka amin'ny efijery LCD izay anehoana ny famakiana mba hahamora kokoa.
Izy ireo koa dia azo zaraina roa araka ny karazana unit miasa:
Rafitra desimal: ampiasain'izy ireo ny singa SI, izany hoe ny rafitra metrika, misy milimetatra na zana-kazo ao anatiny.
Rafitra sôna: ampiasao ny santimetatra ho fotony.
Araka ny refesiny, azonao atao koa ny mahita mikrometa toy ny:
Malagasy: dia ireo izay mandrefy ny halavany na ny savaivony an'ireo sombintsombiny.
lalina: karazana manokana izy ireo izay misy tohana misy fijanonana roa na fototra mijanona eo amboniny. Raha ny spike dia mivoaka perpendicular amin'ny fototra mba hikasika ny ambany ary araka izany dia handrefesana tsara ny halaliny.
an-trano: Izy ireo koa dia novaina miaraka amina tapa-kaonty roa handrefesana ny halavirana na ny savaivony anatiny araka ny tokony ho izy, toy ny ao anaty fantsona, sns.
Misy fomba hafa koa katalaogin'izy ireo, fa ireo no zava-dehibe indrindra.
Aiza no hividianana micrometer
Raha tianao izany mividiana micrometer kalitao sy marina, ireto misy soso-kevitra vitsivitsy mety hahaliana anao:
Promet analogy ivelan'ny mikrometera (0-25 mm misy diplaoma 0.1 mm).
Beslands nomerika ivelan'ny mikrometera (0-25mm misy diplaoma 0.001mm) misy fisehoan'ny LCD.
Tsy misy vokatra..
Mitutoyo MT128-101 Mikrometri-pandrefesana analog (0-25mm).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » General » Micrometer: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ity fitaovana ity
Fantsom-bozaka manetsika: fitaovana tsy fantatra sy azo ampiharina